Apple iyo DJI waxay Daahfureen Nooc Gaar ah oo ah DJI Mavick Pro Drone | Waxaan ka socdaa mac
Haddii ay jiraan hal shirkad oo astaan ​​u ah qaybta diyaaradaha, waa DJI. Moodooyinka ay shirkaddani iibiso waa wax la yaab leh illaa iyo inta tiknoolajiyadda laga hadlayo. Mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan waa DJI Mavick Pro, diyaarad yar oo duuliye laalaaban ah oo ku habboon shandad kasta oo astaamo xiise leh leh.
Ilaa iyo hada, diyaaradan waxaa loo iibiyay laba midab: madow iyo platina. Si kastaba ha noqotee, iyada oo lala kaashanayo Apple, oo midabkeedu midabkiisu cad yahay, waxay go'aansadeen inay soo saaraan DJI Mavick Pro Alpine White. Moodelkan waxaa laga iibsan karaa dukaanka Apple iyo dukaanka DJI.
Maxaad ka filan kartaa diyaaradan? Hagaag, sidaan horeyba u soo sheegnay, waa moodal leh afar gacmood oo gebi ahaanba la laaban karo iyo tan ku habboon boorsada ama shandada. Sidoo kale, waa koox aad la macaamili karto iPhone ama iPad - oo ay ku jiraan 12,9-inch iPad Pro - ama iyada oo loo marayo kantaroolka fog ee lagu daro xirmada iibka. Oo, taxaddar, maxaa yeelay diyaaraddan waxaa lagu wadi karaa masaafada ugu badan ee 7 kms.
Dhinaca kale, ismaamulka DJI Mavick Pro Blanoc Alpino waa illaa 27 daqiiqadood oo lagu soo oogayo hal lacag oo keliya. Iyo, sida haddii tani aysan ku filnayn, waad gaari kartaa a xawaare ilaa 65 km / saacaddii. Awood ahaan sawir qaadista iyo duubista fiidiyowga, Mavick Pro wuxuu leeyahay kaamiro awood u leh duub fiidiyowga xallinta 4K iyo HD dhammaystiran oo fiidiyoow ah. Kaamiradu waxay leedahay dareemayaal leh xaddiga ugu sarreeya ee 12 megapixels.
Ugu dambeyntii, gudaha xirmada iibka oo gaareysa 1.249 euro laba baytari oo casri ah ayaa lagu daray; boorso boorso ah, saddex lammaane oo firaaqeeyayaal ah (alpine white); kontoroolka fog oo leh badhanno gaar ah; iyo kaarka xasuusta ee 16GB MicroSD si loogu kaydiyo wax kasta oo ay qabteen kamaradda DJI Mavick Pro Alpine White.
Faahfaahin dheeraad ah iyo iibsasho: Apple
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Apple iyo DJI waxay bilaabeen nooc gaar ah oo ah nooca loo yaqaan 'DJI Mavick Pro drone'